Baqshadda 'PTFE' EPDM gasket - CIXI DongFENG SEALING & xir xirmada Co., Ltd
Baqshadda PTFE EPDM gasket
Baqshadda PTFE EPDM gogosha ka faaiidaysanaysa jaakadda PTFE waxay caan ku noqotay adeegsiga ba'an ee waxyeelleeya sababtoo ah daqiiqad yar. Kadeedka fadhiga, iska caabinta gurguurta ee aadka u wanaagsan, qalloocsanaanta sare iyo xulashada agabyo kala duwan oo buuxiyo si loo hubiyo waxqabadka ugu habboon ee codsi kasta oo gaar ah. Feature Product: l shiidaa 100% kiimikada iska caabin l caabbinta Heerkulka: -200 ~ + 260 ℃ l Cadaadis Cadaadis: 4Mpa Codsiga gogosha baqshadda Codsiga XNUMXMpa ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa cuntada iyo habka warshadaha ...
Shuruudaha Payment: Western Union ama PayPal ， T / T, L /
Baqshadda PTFE EPDM gogosha ka faaiidaysanaysa jaakadda PTFE waxay caan ku noqotay adeegsiga ba'an ee waxyeelleeya sababtoo ah daqiiqad yar. Kadeedka fadhiga, iska caabinta gurguurta ee aadka u wanaagsan, qalloocsanaanta sare iyo xulashada agabyo kala duwan oo buuxiyo si loo hubiyo waxqabadka ugu habboon ee codsi kasta oo gaar ah.
l Ku dhowaad 100% iska caabin kiimikaad
l Cadaadiska heerkulka: -200 ~ + 260 ℃
l Cadaadiska Cadaadiska: 4Mpa
Goomayaasha baqshadda PTFE waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa cuntada iyo habka warshadaha halkaas oo aan la oggolaan karin in wasakheynta waxyaabaha dhexdhexaadka ah. Ku habboon alkalis dhexdhexaad ah oo adag, dareerayaasha cryogenic, oksijiinta, gaaska koloriinta iwm.